Root ary apetraho ny fanarenana amin'ny Xperia S | Androidsis
Androany avy amin'ny Androidsis, manome anao ny lalana hamongorana sy hametrahana a famerenana ao amin'ny anao Sony Xperia S. Mba hamongorana azy io dia tsy maintsy manana ny kinova farany farany isika, manaraka ity manaraka ity tutorial azontsika atao ny mametraka azy amin'ny findaintsika.
Izahay dia hanazava tsikelikely ny fomba famongorana ny Xperia S voahidy bootloader, manaraka.
Ity rakitra manaraka ity
Mamaky firmware izahay .50
Rehefa vita ny dingan'ny flashing dia averinay indray ny telefaona finday
Avelantsika hanomboka irery ny finday, ary ho hitantsika fa manana ny rindrambaiko SuperSu napetraka izahay ary hamono ny finday.
Ankehitriny isika dia hametraka a famerenana amin'ny Xperia S. miorim-paka. Inona no atao hoe fanarenana? Izy io dia menio ahafahantsika manova ny ampahany amin'ny rafitra. Afaka mampihatra MODS isika, mamafa ny angona (WIPE), mametraka ROMS, manao BACKUPS, sns.
Miorim-paka ny findainao
Izahay dia manatanteraka ny fisie
Mampifandray ny finday amin'ny alàlan'ny Mode Debugging USB izahay
Avelantsika hamita ny fizotrany ilay programa
Vantany vao vita ny fizotrany dia hamerina ny finday indray izahay
Raha te hiditra amin'ny sitrana dia tsy maintsy averintsika indray ny finday ary rehefa hiseho ny sary famantarana Sony dia tsy maintsy mikasika ny efijery isika.
Ankehitriny dia hametraka ny kinova farany amin'ny Xperia S izahay, noho izany dia mila ireto rakitra manaraka ireto:
Ampidirinay ny kernel sy ny baseband an'ny firmware .55, homarihinay ireo boaty rehetra afa-tsy ny iray amin'ireo kernel manilika ary manilika baseband, avelantsika toy izao:
Izahay dia mamelona ny telefaona finday ary mahazo ny fanarenana, ary manefa data voafafa / famerenana amin'ny laoniny, ary miditra mialoha ary manatanteraka cache cache dalvik.
Avy amin'ny fanarenana dia mametraka ny ROM .55, ny zip amin'ny Recovery ary ny zip an'ny Superuser
Mamerina mamerina ny finday izahay ary manana ny zava-drehetra.
Fanazavana fanampiny - Ampidiro ny Sony Xperia S anao, Rakibolana Android
Fampidinana - Flashtool, Firmware .50, Firmware .55, File ho an'ny Root, File ho an'ny fanarenana, Superuser Zip, Zip fanarenana, ROM .55
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Xperia S, Root ary fanarenana
Ary ny finday dia voalahatra aorian'ny fametrahana ny firmware sy ny sisa?
Tsia satria tsy voamarika ny famafana
aorian'ny fiorenan'ny faka dia very daholo angona?
Ny flash voalohany mankany amin'ny version .52 dia manome ahy hadisoana
Miaraka amin'ny kinova 6.1.a.2.55 aho, misy fepetra takiana mialoha ve?
fanairana diso, tamin'ny andrana faharoa dia afaka namoaka tsara aho, izay tsy ataon'ny dingana 6 ankehitriny, aorian'ny nanomezako azy io hamerenana azy dia tsy manomboka indray na tsy manao na inona na inona ny console console
Mahalana ny hoe tsy mihoatra ny dingana 6, miasa ho ahy izy io. Mampakatra kernel hafa indray aho izao hanandramanao an'io.
Eo i Victor. Miaraka amin'io kernel io dia miasa izy. Hitako ihany koa fa niova ny sary manjelanjelatra (na angamba nijery ilay sary manjelanjelatra faharoa aho). Ny olana dia ny nandefasana ny kernel fotsiny, tsy namafa na nampiditra ny zava-drehetra. Toy ny ankehitriny dia miasa. Misaotra 😀
Eny, mpampiasa maro no nitatitra bibikely, ho an'ny sasany kosa dia niasa fa tsy. Toy ny ankehitriny dia tokony hiasa ho an'ny rehetra izany.
Tsy miverina amin'ny sela ilay sela, inona no hataoko?
amin'ny dingana 6 *
Ny sela dia tsy miverina amin'ny dingana 6, inona no ataoko ?: L
Efa nanandrana ny fomba vaovao ve ianao?
Voafaritra miaraka amin'ny fomba vaovao ve izy io?
Salama, nikasa ny hamongotra ny Xperia S aho, saingy tsy haiko hoe aiza no ahazoana an'ity olana ity. Tokony hanao ny dingana rehetra ve aho? Sa dingana manokana fotsiny? Toy ny etsy ambony hitako fa milaza ny hoe "manaraka ny manaraka tutorial", tokony hanaraka an'io lesona io aloha ve aho alohan'ny hanohizako ity torolàlana ity?.
Ity tutorial ity dia raha tsy ny rindrambaiko farany fotsiny no tadiavinao.
Ny iray eto dia ny famongorana azy, manaraka ny dingana tsirairay rehefa mametraka anao hamaka ny Xperia S
Heveriko ihany koa fa ity fampianarana ity, aorian'ny fakanana azy dia avelao ao amin'ny kinova firmware farany, sa tsy izany?
Miarahaba ary misaotra hatrany
Marina mihitsy! Ny lesona hafa dia ho an'ny olona tsy te hiditra amin'ny tontolon'ny faka.
Aorian'ity fampianarana ity dia hahazo ny kinova farany ianao, alao izany ary apetraho fanarenana manokana.
Heveriko fa amin'ny fanarahana ireo dingana rehetra ato amin'ity lesona ity dia avelako ao amin'ny kinova farany an'ny firmware koa, sa tsy izany? Ary ny fanontaniana farany, rehefa avy namaka izany dia namela azy vita, very ve ny fiantohana na miova amin'ny fomba rehetra?
nahatratra fisie iray tamin'ny internet antsoina hoe.
Misintona azy ianao dia mikapoka ny birao
avy eo amin'ny findainao dia ampodihinao ny maody debugging USB
avy eo loharano tsy fantatra
Vitao ny fampandehanana ilay rakitra izay alainao amin'ny maody mpandrindra
dia ampifandraisinao ny sela ary VITA!
Tsy maintsy ekenao aloha na hamarininao ny zoro eo amin'ny zoro ambany havia amin'ny programa vao nosokafanao.
Torohevitra raha tsy mandeha amin'ny famerenana voalohany, na ovao ny toerana misy ny seranana USB napetrakao ny tariby finday. tsy misy apgar na inona na inona.
raha tsy izany dia ampidino ny mpamily ADB vaovao.
MANARAKA, tsy maharitra 2 minitra ity fizotrany ity, manamarina azy amin'ny alàlan'ny fampiharana supeuser amin'ny findainao ianao!
Salama tsara, nanaraka ny dingana aho ary nahita olana.
Voalohany amin'ny fotoana mampirehitra azy dia miteny amiko izy hoe:
10/020/2013 16:20:21 - TANDREMO - Tsy raharahina ity rakitra ity: simlock.ta
Na eo aza ny filazany izany dia mifarana tsara ilay izy ary milaza ny mamadika telefaona. Ahodiko io ary angatahiny amiko ny PIN, ny fisafidianana ny fiteny ary ny zavatra angatahan'ny telefaona rehefa nanatanteraka azy voalohany. Aorian'io dia averiko ny fanafoanana indray, manokatra ny fampiasana aho, misafidy 1, tsindrio enter ary aorian'ny famoahana mandritra ny fotoana fohy dia miafara amin'ny filazany fa marina ny zava-drehetra.
Miteraka fisalasalana ao amiko izany satria tsy manao na inona na inona amin'ireo voalaza ireo:
- Amin'ny telefaona finday dia ho hitantsika ny safidy hamerenana backup, hanaiky izahay ary hamela anao hamerina azy.
- Avelantsika hanomboka irery ny finday, ary ho hitantsika fa manana ny rindrambaiko SuperSu napetraka izahay ary hamono ny finday.
Aza manahy momba an'io dingana io, fa miseho foana izany.
Mikasika ny iray hafa, raha apetrakao ny SuperSu dia tsy tokony hatahotra ianao sao hiverina indray.
Tsy apetraka ilay rindranasa, inona no azoko atao? : S
Manaraka ny dingana 1 ka hatramin'ny 1 ve ianao? Tokony hiasa ho anao izy io, satria miasa ho an'ny mpampiasa hafa izy io.
Manamarina aho fa tonga lafatra ny zava-drehetra, tsy nanana bokotra hanaiky fampiharana avy ivelan'ny tsena fotsiny aho. Aorian'izany rehetra izany dia mandeha tsara izy io. Fanontaniana fotsiny no ataoko, ara-dalàna ve ny fanjavonan'ilay kisary (ao amin'ny biraon'ny laharam-pahamehana) ny tahan'ny angon-drakitra nilaozako taloha? izao indraindray dia mavesatra ny kisary mandehandeha (Yoigo aho).
Ara-dalàna izany, aza manahy fa mitranga amin'ny an'i Yoigo rehetra izany
Raha ny fahitako azy, ny ROM default an'i Yoigo dia nampandeha roaming, sa tsy izany? Ka izao ny hany zavatra tokony hataoko dia ny fanazaran-tena amin'ny fivelezana ary raha miala amin'ny firenena aho dia afaka mandray azy, tsy misy hafa, sa tsy izany?
Raha ny marina, raha mbola tsy miala amin'ny firenena ianao dia avelao izy ho mavitrika.
Miezaha tsy hanakaiky ny sisintany haha
hello salu2 Victor Morales Te-hongotako ny sela Xperia S fa matahotra aho fa tsy handeha tsara io ka tiako ho fantatra tsara aho, ahoana no hanombohana
fanamarihana dia hoy izy:
Salama Carlos te-hijery ny xperia aho, ny voalohany dia ny .55 Hitako fa eto ambany dia milaza fa io no .50 Ilaiko ny mametraka ny .50 hanohy ny faka na afaka manohy ny .55 misaotra
Mamaly ny memo
Mandresy aho haha
Araho tsirairay ny dingana, satria ilaina aloha ny mamaka ny kinova .50 hahafahana mametraka ny .55 aoriana.
rehefa apetrako ny 1 hanombohana ilay programa dia milaza amiko izy fa tsy afaka mahita ilay lalana voatondro
Tsy maintsy misafidy ny safidy 1 ianao ary miandry azy hangataka anao hampifandray ilay finday.
Raha tsy mahita ny Xperia-nao ianao dia tsy manana mpamily napetraka araka ny tokony ho izy.
Omeko ny 1 mifandray na tsy mifandray, azoko fa tsy hitany ilay lalana voafaritra = (
Manandrama seranana USB samihafa
tsy misy tsy miovaova hatrany: tsy afaka mahita ny lalana voatondro ny solosaina
Hafahafa izany. Manana safidy safidy deboka usb sy loharano tsy fantatra ve ianao?
memoi dia hoy izy:
Mamaly an'i memoi
vicor hello tsara mandre ianao mihaino ahy dia ny ao amin'ny roo miaraka amin'ny leras maitso odo mandeha bn fa amin'ny maha miad medice divice tsy hita ia tsy hitako izay hatao misaotra
Tsy nisy azoko
mpandresy, miala tsiny fa amin'ny dingana misafidy safidy 1 dia ampifandraisiko ny sela amin'ny fandefasana ny zavatra rehetra mandeha tsara fa amin'ny fizotrany dia tafahitsoka amin'ny ampahany iray aho hoy aho fa tsy hita ny divice ary mbola miteny hoe miandry ny divay hiakatra indray aho, avy any any tsy hitranga izany, manana ny cellule-ko amin'ny mode debugging ary mbola manana safidy hametraka apk izay tsy avy amin'ny tsenan'i goglee aho
Raha miseho ny famerenana dia apetrako ny safidy hamerenana azy, fa eo amin'ny efijery mainty misy litera maitso, hitako izay nolazaiko taminao, misaotra anao avy amin'ny antwemano
Heveriko fa tsy nametraka ny tatatra aho rehefa nametraka azy ireo
Rehefa apetrako ny maody debugging dia nofoanana izany ary ao amin'ny efijery mainty dia milaza amiko fa tsy hita Andriamanitra. Miverina indray ny maody debugging aho rehefa miverina amin'ny laoniny ary io no andikana ahy amin'ny rakitra na Copy amin'ny toerana misy azy ireo
ny fahazoan-dàlana mamela ny fahazoan-dàlana no fototry ny anao
azonao atao ny manidy ny fangatahana kaomandy misokatra rehetra izao
rehefa mamerina ny rafitra dia vita ny zavatra rehetra
Hafahafa ny manjo anao, andramo atao amin'ny solosaina hafa
Ary ho voalamina io raha ataoko izany?
Raha tsy tianao avelako izy io satria avy amin'ny ozinina io, aza atao ny mamafa fafana rehefa manazava, fa tsara ny anaovanao izany
Fa efa nopotsiriko indray mandeha io, ka tsy soratako ireo?
Raha efa vitanao io dia havelanao amin'ny orinasa
fampirantiana dia hoy izy:
Salama Victor, fanontaniana iray. Rehefa miorim-paka ianao, azo vohana ve ny findainao?
Valiny tamin'i Sergi
Tsy misy Sergi, raha hamaha ny findainao dia tsy maintsy mahazo ny kaody mamoha ianao amin'ny alàlan'ny fandoavana na amin'ny alalàn'ny orinasanao hanome anao.
dany aza manahy, flash indray ary voila.
Amin'ny fampiasana an'io fomba io, ho vitako ve ny hametraka cyanogenmod amin'ny terminal miaraka amina bootloader mihidy nefa tsy halefako any amin'ny SAT hivoha? Misaotra!
Tsia, CyanogenMod ihany no miasa ho an'ny bootloaders misokatra.
Damian Estevez dia hoy izy:
Andao hojerentsika raha mazava amiko ny zava-drehetra ... tsy mametraka rom manokana amin'ny xperia isika, dia miorim-paka fotsiny izy ary mametraka ny kinova farany an'ny rindrambaiko izay mitondra ny sela ho "original" ... marina? Azoko atao ve ny mametraka roms manokana amin'ity flash ity? Misaotra amin'ny fidirana!
Valiny tamin'i Damian Estevez
Raha te hametraka roms dia ilaina ny manao an'ity tutorial ity aloha ary avy eo mametraka ny rom.
David escobar dia hoy izy:
Salama Victor, manana kinova 6.1.A.2.55 aho raha manandrana mamaka azy io, tsy avelako ve izany? Ary zavatra iray hafa izay tsy azoko atao ny misintona ny ROM dia ny ahafahanao manamora ny fampidinana izay tiako indrindra, arahaba.
Valiny tamin'i David Escobar
hey indray andro ny zava-mitranga dia efa nataoko ny fomba sy ny zava-drehetra fa etsy ankilany dia nanova zavatra vitsivitsy aho ary tsy maintsy nirehitra indray ary voafafa ny faka. izao dia te-hanao ny faka aho fa amin'ny fotoana hanomezana azy io hamerenana mba hamerenan'ny telefaona finday dia miteny amiko izy hoe "avereno ny memoara ivelany" ary rehefa miverina izy dia tena miadana ary tsy mandeha ny fakantsary: ​​/ inona no mety ho lesoka. amin'ny lafiny iray dia Xperia S.
ONDRIN'I dia hoy izy:
Salama, efa nanao ny zava-drehetra aho saingy mijanona amin'ny sony ary tsy miala eo, naveriko tamin'ny bokotra off ary + ary mbola mijanona ho iray ihany aho, inona no azoko atao
Mamaly an'i ovenegas
hey afaka misaotra betsaka anao aho, lahatsoratra tsara, efa nanandrana tamin'ny maro aho ary ity irery no nanompo ahy, misaotra betsaka
Salama, rahampitso tolakandro. Fotoana vitsy lasa izay dia nangataka ilay kaody hamaha ny Xperia S aho, andro vitsivitsy taty aoriako dia napetrako ary niasa tonga lafatra. Fa iray volana eo ho eo taorian'ny lany ny bateria dia maty izy io ary rehefa namono azy aho dia nangataka tamiko ny pin karatra toy ny mahazatra ary avy eo pin hafa izay tsy haiko hoe inona izany ary voasakana ny finday. Ahoana no ahafahako mamoha azy ??? Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, Misaotra betsaka!
Julian Tamayo dia hoy izy:
Nataoko ny fomba rehetra ary aorian'ny nametrahako izay rehetra nijanonako tao amin'ny hafatra SONY dia nanandrana fomba iray alina aho hamerenana azy io indray ary tsy avelany
manipy ahy ity hafatra ity… FANAMPIANA azafady, tavela tsy nanana finday aho
- Fitaovana mifandray amin'ny maody tselatra
- Manomana rakitra ho an'ny flashing
- Ampifandraiso amin'ny flashmode azafady ny fitaovanao.
- Fitaovana fanokafana ho an'ny R / W
- Fampahalalana momba ny famakiana fitaovana
- Tsy afaka mamaky an-telefaona aorian'ny nanokafany azy.
- manandrana manohy ihany
- Atombohy ny Flashing
- Loatra fanodinana
- Fanamarihana lohateny
- Fampianarana flash famaranana
14/000/2013 17:00:40 - ERROR
- Fahadisoana amin'ny processHeader: 22: Tsy eken'ny fitaovana ilay baiko.
- Fahadisoana manjelatra. ny lalao
- Tapaka ny fitaovana
Valiny tamin'i Julian Tamayo
Andres Teiri Rodriguez Rivero dia hoy izy:
handresy fanontaniana iray ananako .55 raha ny dingana voalohany ary raha tsy tiako izany dia tsy ataoko ny fanarenana
Valiny tamin'i Andres Teiri Rodriguez Rivero
omarvenegas dia hoy izy:
fanontaniana iray isaky ny te-hiditra amin'ny famerenana amin'ny laoniny aho dia tsy maintsy mihazakazaka ny programa ary mampifandray ny sela amin'ny vodin-trano. ???
Mamaly an'i omarvenegas
Hernando Arróspide Peralta dia hoy izy:
Marina ho an'ny Android 4.1.2 Vao avy nanavao ny Xperia S miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny Pc aho ary mamafa ny fotony teo aloha tamin'ity fomba ity, azoko atao ve ny mamaka azy io indray?
Valiny tamin'i Hernando Arróspide Peralta
Gonter dia hoy izy:
hey nataoko ny nolazainao fa tsy manomboka amin'ny fomba fanarenana izany fantatro fa manjary gaga ary avy eo miverina manomboka indray ilay kisary sony fa tsy manomboka amin'ny fomba fanarenana ???
Mamaly an'i Gonter